Ihe ị ga-ahụ n'obodo Wroclaw na Poland | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Wroclaw
Susana Garcia | | Getaways Europe, General, Poland
Wroclaw, nke a makwaara dị ka Wroclaw na Polish ọ bụ obodo dị na ndịda ọdịda anyanwụ Poland. Obodo a dị n’ebe azụmahịa na ịgafe osimiri Oder, bụ ebe e wuru ụlọ ochie ahụ na ebe obibi. N'oge emepechabeghị ọ nwere nnukwu ọchịchị ndị German na n'oge mgbanwe mgbanwe ọrụ ọ ghọrọ otu n'ime obodo ndị mepere emepe. Ugbu a anyị nwere ebe ndị njem nleta nwere obodo ochie nke dị nnukwu mkpa kwupụtara World Heritage Site.
Site na Poland ị na-agakarị Warsaw ma ọ bụ Krakow, mana obodo a amachaghị nke ọma na-agbagwoju ndị na-eleta ya anya. Ekwuru na ọ bụ obodo na-eju gị anya, ya mere na ọ bụ ihe dị mma ịtụle ebe niile a pụrụ ịhụ na ya.
1 Rynek, bụ isi akụkụ ya
2 Ogige Solny
3 Ogige Ossolineum
5 Katidral Wroclaw
6 Raclawice Panorama
7 Mahadum Wroclaw
Rynek, bụ isi akụkụ ya
Rynek bụ isi ma ọ bụ isi, nke bụ ụlọ ahịa ochie ochie. Ọ bụ ebe kachasị mma ị ga-aga inyocha obodo ahụ, ebe ụzọ iri na otu dị iche iche na-amalite site na square a. Enwere iri isii ụlọ gbara ya gburugburu na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị photogenic, bụ nke abụọ kasị ukwuu na mba ahụ. Ihe dị ka afọ iri atọ gara aga, ọ bụ square ebe ụgbọala gafere mana taa, ọ na-agagharị kpamkpam maka obi ụtọ nke ndị njem nleta nwere ike ịse foto mara mma ma gafere ya nwayọ. Fọdụ n'ime ihe ngosi ya bụ underlọ n'okpuru Golden Sun, Underlọ N'okpuru Akpata ma ọ bụ Underlọ n'okpuru Blue Anyanwụ. Na square ahụ, ọmarịcha ụlọ nzukọ Gothic nke narị afọ nke XNUMX pụtara ìhè. Chọọchị Santa Isabel malitere na narị afọ nke iri na abụọ ọ bụ ezie na ọ mara mma na ụdị Gothic. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa akụkọ ihe mere eme na obodo a na ebe a na-akwụsị.
Ntughari a ga - abia Plaza de la Sal ma o nwere uzo di iche na - eme anyi ka anyi gaa leta ya. Otu n'ime ha bụ na square can nwere ike ịzụta okooko osisi 24 awa n'ụbọchị, ihe a na-adịghị ahụkebe n’ebe ọ bụla. Mana nke a bụkwa ụlọ mposi ọha na eze meriri onyinye maka ihe kacha mma na Poland niile na 2012. Ihe ọzọ bụ na na square a, enwere ọnụ ọgụgụ iri na otu nke gnomes, yabụ echiche na-atọ ụtọ bụ ịchọ ha ma chọpụta otu site na otu. Ma, ọ bụ na obere ihe oyiyi ndị a nke gnomes jupụtara n’obodo ahụ ma nwee ọtụtụ narị n’ime ha, ya mere ọ ga-abụ ihe ịtụnanya ịbịakwute ha. Otu n’ime ihe ndị obodo ahụ agaghị echefu echefu.
Nke a bụ a ochie ndị nọn prussian, otu n'ime anọ ndị fọdụrụ mgbe ha dị iri na atọ n'oge gara aga. A na-eji ya ugbu a dị ka kọleji. Ma ihe na-adọrọ mmasị banyere ebe a bụ n'èzí. Ọ bụ maka ogige ya mara mma ma debekwa nke ọma, nke bụkwa otu n’ime ebe ndị ahụ enwere ike ịchọta udo n’ime ọgba aghara na mkpọtụ obodo ahụ. Ọ bụ ebe a tụrụ aro kpọmkwem n'ihi foto ndị mara mma enwere ike iwe ya.
Nke a bụ agwaetiti nke katidral, ebe ebe ndị mbụ biri n'obodo ahụ biri. Osimiri Oder gbara ya okirikiri ma n'ime ya ka Katidral nke obodo ahụ. I nwekwara ike ịhụ Archdiocesan Museum, nke kacha ochie n’obodo ahụ, ebe enwere ihe ncheta na ihe ofufe nke ewepuru ma ewere ya maka oke uru dị na akụkọ ihe mere eme na nka. A na-akpọ akwa mmiri ịga agwaetiti a Puente de los Paddados n'ihi na o nwere ọtụtụ n'ime ha, ọbụnakwa na-ere ha n'ọnụ ụzọ ka anyị nwee ike ịhapụ obere mpempe anyị na ya.
Katidral a dị n’agwaetiti obodo ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ nke a kacha mara amara, e nwere ụka atọ ọzọ n’agwaetiti ahụ. Ọ bụ gothic na neo-gothic ụdị ma site na akwa akwa ahụ anyị ga-ahụworị nnukwu ụlọ elu ya abụọ, nke bụ ihe kachasị pụta na agwaetiti ahụ. Site na mbara ụlọ elu ahụ, anyị ga-enwe ọhụhụ dị ukwuu banyere obodo ahụ, enwekwara igwe mbuli elu, yabụ na ịgaghị enwe ọdịdị.
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n'ime nleta kachasị achọta n'obodo niile. Ọ bụ nnukwu panoramic eserese nke na-enye mmetụta dị ịtụnanya na onye na-ekiri ya. Ọ na-eme ka anyị nwee mmetụta nke otu eserese ahụ, dịka ọ na-ekpuchi ya na panoramic, nke mere ndị ọbịa niile ji enwe mmasị na ya nke ukwuu. Ihe osise a na-anọchite anya agha Raclawick nke 1794.
Mahadum obodo a enweela narị afọ atọ, na-eme ka ọ bụrụ ebe akụkọ ihe mere eme. Inside na Mahadum Museum ị nwere ike ịchọta ezigbo ọla nke ụdị Siroshị nke Baroque nke na-eju onye ọ bụla hụrụ ya anya. Ọ bụ maka nke Aula Leopoldina. N’otu ụdị a anyị nwekwara ike ịchọta Oratorium Marianum. N’ikpeazụ anyị chọtara Matlọ Mgbakọ mgbakọ na mwepụ, nke bụ ụlọ nche ochie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Wroclaw
Njem ịga Rome na ụmụaka
Ihe ị ga-ahụ na Bali